५९ युनिट रगत संकलन | eAdarsha.com
पोखरा, २६ साउन । लायन्स क्लब अफ पोखरा गतिशीलको स्थापना दिवसका अबसरमा रक्तदान कार्यक्रम तथा चार्टर डे सेलिब्रेशन सम्पन भएको छ ।
रक्तदान कार्यक्रममा ५९ युनिट रगत संकलन भएको छ । क्लबका अध्यक्ष लेखबहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि ला. दीपक श्रेष्ठ तथा विशेष अतिथि पिआरो इन चिफ राम बसेलको चिफ एडभाइजर बिनोद ढुंगाना ,पोखरा महानगरपालिका वडा न. १ का वडा सदस्य रुद्र सुवेदी लगायत अन्य अतिथिको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा द्धितीय उपाध्यक्ष लायन इन्द्र रिजाल ब्लबका सह कोषाध्यक्ष लायन राम्जी तिवारीले रक्तदान आफ्ना भनाई राखेको थिए ।
साथै लायन्स क्लब अफ पोखरा गतिशीलद्वारा नेपालको लायनवादको स्वर्ण वर्षको उपलक्ष्यमा,प्रमुख अतिथि लायन दुर्गा ढकालको आतिथ्यमा क्लबका अध्यक्ष लेखबहादुर प्रधानको अध्यक्षतामा पोखरा –३ नदिपुरमा १५ जना बालबालिकालाई पोषण युक्त खाद्य सामग्री वितरण गरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमका संयोजक लायन टेकबहादुर गुरुङ रहेको जानकारी सचिब बासुदेव पौडे लले बताए । उक्त अवसरमा रक्तसंचार केन्द्र पोखराका प्रमुख अर्जुन ज्ञवालीले रक्त दाको बारेमा प्रकाश पारेका थिए भने कार्यक्रमको संयोजक रामजी तिवारी रहेका छन् ।